﻿	Mini Chocolate Icebox achịcha - Ezi Ntụziaka
ọ dịghị akpọchicha chocolate peanut butter fudge
achịcha ojii nke ejiri yogọt gris mee
Mini Chocolate Icebox achịcha
Chocolate Icebox achicha abụrụla ihe eji megharịa ọnụ kemgbe m bụ nwatakịrị!
Layer na kuki wafer na ude mmiri a na-eme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla n'ime friji ruo mgbe ọ gbanwere ka ọ bụrụ achicha achicha achọrọ!
Anyị hụrụ achịcha icecake ndị a n'anya maka oge ọ bụla. Enwere ike itinye ha akwa mmiri ma ọ bụ chọkọletị iji kwekọọ n'oge ọbụla!
esi agba ojii na pan
Obere achicha achicha achicha di nro nke di uto ma di oke mfe nke iji ihe ntaneti ano! Ha zuru oke anaghi eme achịcha maka ụbọchị Valentine, oge pụrụ iche ma ọ bụ maka ụbọchị ọ bụla!
Ọ dịghị onye ga-ekwenye na ọ dị mfe ha ime na akụkụ kachasị mma, enweghị nri achọrọ!
Kedu ihe achicha Icebox?
Achịcha icebox (aka achicha friji) bụ ihe eji megharịa ọnụ nke dị kemgbe ọtụtụ afọ, ọkachasị ụdị a! Enwere m ike icheta nne m na-eme achicha a maka oge pụrụ iche ma ọ bụ mgbe niile nnukwu ọgwụgwọ!
Ndị friji abụghị ndị nkịtị ruo mgbe 1920 ma ọ bụ 30. Tupu oge ahụ, a na-eji 'icebox' ma ọ bụ 'kọlọtọ oyi'. Ọ bụ igbe mkpuchi nke nwere mgbochi ice na mpaghara dị n'elu ma site na nke ahụ, ikuku dị jụụ ga-ekesa na nri dị na mpaghara dị ala. Ka ice gbazee, mmiri ga-atachasị ma ozugbo ọ belata, a ga-etinye ice ọhụrụ.
Omenala, achịcha icebox emere site na kuki nke etinyere n’etiti ude pịa ma friji maka awa 4 (ma ọ bụ n’abalị). Nri ude na-agbanwe kuki ndị siri ike ma sie ike, na nro na achicha dịka - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke anwansi!
Ezi ntụziaka na oyi na-atụ shredded hash browns
Mgbe ị na-eji kuki chọkọleti na ude pịa ị ga-ejedebe na ọmarịcha ihe eji eji oji na nke ọcha dị ọcha ka a na-akpọkarị achicha icebox a mgbe ụfọdụ! N’ime afọ niile anyị nwere achicha a, mama m ga - eme ya ka ọ ghọọ osisi wee fesaa ya mana ekpebiri m ịme achịcha icebox ice dị obere! Izu nri achicha zuru oke na-atọ ụtọ ma ọ dị mfe ịme n'ihi na ha pere mpe, dịkwa mfe ijikwa akụkụ.
Creamy, light and delicious Mini Chocolate Icebox Cakes bụ ihe ọchị na ọmarịcha eji megharịa ọnụ echiche na ezinụlọ gị ga-n'anya!
osikapa krispie emeso marshmallow creme na ahụekere butter
Amaara m na ọ bụghị naanị na ezinụlọ gị ga-enwe mmasị iri achịcha achicha icebox, mana ị ga-ahụkwa n'anya ịme ha! N'ihi gịnị?
Ntụziaka a nwere naanị 4.
Ntuziaka dị oke mfe, zuru oke maka ụmụaka nke afọ niile!
Kidsmụaka (na ndị okenye) na-atụkarị anya site na mgbanwe anwansi site na kuki na-esi ísì ụtọ na-eme ka achicha dị ka nke na-ewere ọnọdụ n'oge ọ bụla!
Kedu ụdị wafer nwere ike iji mee achicha Icebox?
Achịcha Icebox a na-eji obere chocolate chocolate wafers (ana m eji ya mgbe niile.) Wafers ama ama ), ma ihe ọ bụla chocolate wafer ga-eme. Nwekwara ike iji gram wafers ma ọ bụ ọbụna kuki chocolate chip (ndị crunchy) iji mepụta nri dị mfe a!
Mini Chocolate Icebox Cakes dị mfe iji naanị ihe 4 mejupụta yana enweghị nri achọrọ. Nke a doro anya ịbụ ọkacha mmasị n'ezinụlọ gị kwa!
5site na5votu NyochaNtụziaka
Mini Chocolate Icebox achicha
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nri0 Nkeji Oge zuru ezuiri na ise Nkeji Ọrụ6 achịcha Onye edemedeHolly Nilsson Mfe enweghị achicha chocolate icebox achịcha, nanị tojupụtara ma zuo ike. Bipute Ntụtụ
▢4 iko ude dị arọ
▢⅓ iko ntụ ntụ
▢1 ngaji vanilla
▢1 ngwugwu chocolate wafers M na-eji Famous wafers
▢Chocolate maka ịchọ mma
Ikpokọta ude dị arọ, shuga ntụ ntụ na vanilla na nnukwu efere. Otiti na ọkara ọsọ ruo mgbe N'ụbọchị nke abụọ, na oké.
Kuki 6 wafer kuki nwere ihe dị ka 1 ngaji nke ude nchara n'etiti akwa ọ bụla. (Bido ma kwụsị na kuki wafer, ị ga-enwe kuki 6 na akwa 5 nke ude na-esiri ike).
Tinyegharịa kuki ndị fọdụrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ (ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnwee ude pịa), kpoo ihu na mpụta kuki na ude ntụ.
Tinye obere achịcha na friji ma ọ dịkarịa ala awa 4 ma ọ bụ abalị.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, jiri peeler akwukwo nri ka “kpochapụ” shavings chocolate ka ị chọọ mma. (Acha ma ọ bụ chocolate sprinkles ọrụ dị ka nke ọma).
Calorisị:579,Carbohydrates:iri na otug,Protein:3g,Abụba:58g,Abụba Ajuju:36g,Cholesterol:217mg,Sodium:67mg,Potassium:119mg,Sugar:7g,Vitamin A:Ogbe 2330IU,Vitamin C:1mg,Calcium:Ogbe 103mg,Iron:0.1mg
IsiokwuMINI CHOCOLATE ICEBOX Cakes, Anaghị akpọọ nkụ N'ezieDezaati Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Chocolate Oreo Osikapa Krispie emeso
Ahụekere Bọta Bute Banana Icebox achicha
kedu ụdị agwa eji na chili
Anaghị Achicha Chips Ahoy achicha